एन्ड्रोइड एम–६.०, कस्ता छन् त बिशेषता हेरौं ! « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित
एन्ड्रोइड एम–६.०, कस्ता छन् त बिशेषता हेरौं !
२२ जेष्ठ २०७२, शुक्रबार ०१:५२
विज्ञान र प्रविधिको युगमा गुगललले फेरी नयाँ प्रविधि भित्र्याएको छ । गुगलले हालै आयोजना गरेको कन्फ्रेन्समा एम डेभलपर्स प्रिभ्यु सार्वजनिक गरेको छ । अत्याधुनिक सुविधायुक्त एम ६ मा विभिन्न किसिमका विशेषताहरु रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनले सार्वजनिक गरेको अपरेटिङ सिस्टममा यस्ता विशेषता रहेका छन् ।
फिंगरप्रिन्ट सेन्सर सपोर्टः कम्पनीले सार्जजनिक गरेको अपरेटिङ सिस्टममा फिंगरप्रिन्ट रिडिंग टेक्नोलोजीको प्रयोग गरिएको छ । यस अघि सामसुंग ग्यालेक्सी एस ६, एचटीसी वन एम ९ लगाएतका स्मार्टफोनमा मात्र यस्तो सुविधा रहेको थियो । आगामी दिनमा सस्ता डिभाइसमा पनि यो प्रविधि उपयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
एन्ड्रोइड पेः यो पनि गुगलले पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याएको छ । यस अघि एप्पल पे प्रयोगमा आइसकेको छ । एनएफसीको माध्यमबाट काम गर्ने यस प्रविधिमार्फत मोबाइल पेमेन्टको सुविधा लिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ । एन्ड्रोइड किटक्याट ४.४ सम्मका अपरेटिङ सिस्टममा यो प्रयोग गर्न सकिने छ । एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन सर्ट रेन्जमा फ्रिक्वेन्सीको डिभाइस कनेक्सन गर्न मद्दत गर्छ ।
लामो ब्याट्री लाइफः गुगलले प्रोजेक्ट वोल्टा जस्तै नयाँ सिस्टममा ब्याट्री लाईफ थप टिकाउ बनाएको छ । यसका साथै छिट्टै चार्ज हुने लगाएतका विशेषता पनि गुगलले थप गरेको छ । एजेन्सीहरु
प्रकाशित : २२ जेष्ठ २०७२, शुक्रबार ०१:५२